Azụrụ M Drone Ọhụrụ maka Ndị Ahịa ... na Ọ Dị zingtụnanya | Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga, m na-adụ ọdụ nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịkwado ụlọ na ntanetị ha. Anyị wughachiri ma kachasị saịtị ha mma, bido mkpọsa na-aga n'ihu iji jide nyocha, wee bido bipụta ọrụ ha n'ịntanetị. Otu ihe na-efu efu, n'agbanyeghị, dị na mgbe foto nke Njirimara.
Site na nbanye na usoro ha na usoro njikwa ọrụ, enwere m ike ịhụ ihe ngwongwo na-emechi na mgbe a na-arụ ọrụ. Mgbe m gụsịrị otu nyocha nke ntanetị, azụrụ m a DJI Mavic Pro drone.
Ọ bụ ezie na ndị drone were foto mara mma ma dịkwa mfe iji ofufe, ọ bụ ihe mgbu na ịtọlite ​​ma rụọ ọrụ. Ekwesịrị m ịbanye na DJI chere na ngwa iPhone, jikọọ ekwentị na onye na-achịkwa ya, ma banye worse nbanye na ụgbọ elu ọ bụla. Ọ bụrụ na m nọ na mpaghara amachibidoro iwu, m ga-edebanye ụgbọ elu m. Eji m drone rụọ ọrụ iri na abuo ma ọ bụ karịa wee resị ya onye ahịa ahụ mgbe mụ na ha mechara. Ọ bụ ezigbo drone, ha ka na-eji ya taa. Ọ dịrịghị m mfe iji ya na enweghị m onye ahịa ọzọ ebe ọ bara uru.
Ngwa ngwa ngwa otu afọ na ụlọ ọrụ data Midwest m na-emepe ọhụụ ọhụụ data center na Fort Wayne, Indiana nke gụnyere ọta EMP. Oge eruola mgbe m ga-ejide ụfọdụ foto, ka m wee jide ụfọdụ ndị na-ese foto na ndị vidiyo na mpaghara ahụ.
Ntughari m natara maka ọrụ ahụ dị oke ọnụ… nke dịkarịsịrị $ 3,000 iji weghara vidiyo na foto nke ọnọdụ 3 nke ụlọ ọrụ ahụ. Nyere oge ịnya ụgbọ ala na ihu igwe, nke ahụ abụghị astronomical… mana achọrọghị m ịnweta ụdị mmefu ahụ.
M wee gụkwuo nyocha na ntanetị ma chọpụta na onye ọkpụkpọ ọhụrụ n'ahịa na-arịwanye elu na ewu ewu, Autel Robotics EVO. Site na ihuenyo dị n'ime njikwa na enweghị mkpa ịbanye, enwere m ike iwepụ mmiri ahụ, fee ya, were vidiyo na foto m chọrọ. O nwere uko ụlọ nke zuru oke nke ukwuu ma ọ nweghị ndebanye FAA ma ọ bụ ikike achọrọ iji fee ya. Enweghị ntọala, enweghị eriri njikọ… naanị gbanye ya wee fee ya. Ọ bụ ihe dị egwu… ma n'ezie dị ọnụ ala karịa Mavic Pro.
Nkọwa ngwaahịa maka drone:
Ejiri n'ihu EVO na-enye igwefoto dị ike na 3-axis na-edozi gimbal nke na-edekọ vidiyo na mkpebi 4k ruo na 60 okpokolo agba kwa nkeji na ndekọ ndekọ ruo 100mbps na H.264 ma ọ bụ H.265 codec.
Iji igwe onyonyo emebere emecha EVO were foto mara mma na 12 megapixels nwere oke ike dị omimi maka nkọwa ndị ọzọ na agba.
Igwe sistemụ kọmputa ọhụụ agwakọrịrị na-enye izere ihe mgbochi mgbochi, nchọpụta mgbochi ihe mgbochi na ihe mmetụta ala maka ọdịda dabara nke ọma na ụgbọ elu ime ụlọ kwụsiri ike.
EVO na-etu ọnụ oge ụgbọ elu ruo nkeji 30 yana nsoro 4.3 kilomita (7KM). Na mgbakwunye, EVO na-enye atụmatụ adịghị mma na-eme ka ị mara mgbe batrị dị ala ma oge eruola ịlaghachi n'ụlọ.
EVO gụnyere onye nchịkwa dịpụrụ adịpụ nke nwere ụlọ OLED 3.3 nke anụ ọhịa na-enye gị ozi ụgbọ elu dị oke egwu ma ọ bụ vidiyo vidiyo HD HD dị ndụ na-ahapụ gị ka ị hụ igwefoto na-enweghị mkpa maka ngwaọrụ mkpanaka.
Budata ngwa Autel Explorer n'efu maka Apple iOS ma ọ bụ gam akporo ngwaọrụ ma jikọọ na onye na-ahụ maka ntanetị ma nweta ohere maka ntọala dị elu na atụmatụ ụgbọ elu dị iche iche dịka Dynamic Track, Viewpoint, Orbit, VR onye mbụ na-ele anya na atụmatụ atụmatụ Waypoint.
Evo nwere oghere Micro SD maka mbufe faịlụ ndị ahụ.
Azụrụ m batrị ọzọ na igbe dị nro maka ebu drone. Ọ na-afụkọta ọnụ nke ọma ma dịkwa mfe iburu.
Zụta Autel Robotics EVO Drone Bundle
Anyị mere ụlọ na-emeghe na ebe data ọhụrụ m wee were mmiri, were foto na vidiyo, ha wee mara mma. Ndị nta akụkọ mpaghara nọ ebe ahụ ma enwere m ike izigara ha vidiyo nke ha mechara jiri na akụkọ akụkọ ha. Izu ole na ole ka nke ahụ gasịrị, akụkọ akụkọ ọzọ gbara ndị nwe ụlọ ajụjụ ọnụ ma tinyekwa vidiyo ahụ. Na, emechara m ka ebe nrụọrụ weebụ ha dị, gụnyere ihe oyiyi na vidiyo dị n'ime ya. Lee foto ndị a:
Ọnụ Gatezọ Eastmá Ọwụwa Anyanwụ
Datalọ Ọrụ data dị na Drone
Ọ bụ ihe kacha mma $ 1,000 M mgbe nọrọ… ugbua na-ịtụnanya nloghachi na ulo oru mbo na a nnọọ, nnọọ obi ụtọ ahịa. Kachasị mma, ọ chọghị ihe ọ bụla ị ga - eji rụọ ọrụ ọ bụla… naanị ịgụ ntuziaka na ị na - ewere oge zuru oke n'ime nkeji. Ọbụna m wepụrụ ya ma nwalee ya ka ọ na-efegharị site na nso… ọ laghachiri n'ime nkeji. Oge ọzọ, n'ezie, m fere ya n'ime osisi wee nwee ike ịmịpụ ya. Ma, n'oge ọzọ, efepụrụ m ya n'akụkụ otu ụlọ… ọ bụ ihe ijuanya na enweghị mmebi ọ bụla. (Whew!)
Akụkụ nke akụkụ: Autel ekwuputala ọkwa kachasị ọhụrụ nke mmiri a, Autel Robotics EVO II… mana ahụbeghị m ya na Amazon.
ngosi: M na-eji koodu mgbakwunye m maka DJI na Amazon n'ime edemede a.
Tags: ma obuAutel robotics EvaAutel robotics Eva 2DJIDJI Mavicdronefoto drone